Sensọ maka Arduino, nnukwu ngwakọta maka ndị ọrụ novice | Akụrụngwa n'efu
Sensọ maka Arduino, nnukwu ngwakọta maka ndị ọrụ novice
Withrụ ọrụ na Arduino nwere ike ịdị ike ma dịgasị iche iche, mana iji mezuo nke a, anyị kwesịrị inwe mmụta dị omimi na dịgasị iche iche banyere arụmọrụ nke Arduino yana ngwa ya dị iche iche.
Otu n'ime ngwa ngwa nke amalite iji mee ihe bụ ihe mmetụta. Ọrụ nke ndị a na Arduino nwere ike ịrụpụta ọrụ na-atọ ụtọ, mana ọ bụghị naanị nke ahụ mana ọ ga - enyere anyị aka ịmatakwu ọrụ nke bọọdụ anyị yana otu esi arụ ọrụ na Free Hardware.
1 Kedu ihe bụ ihe mmetụta maka Arduino?
2 Kedu ụdị ihe mmetụta dị maka Arduino?
3 Enwere m ike iji ihe mmetụta ma ọ bụrụ na m bụ onye ọrụ novice?
4 Kedu ihe mmetụta a na-atụ aro ka ị jiri na Arduino?
Kedu ihe bụ ihe mmetụta maka Arduino?
Otu n'ime ihe ndị kachasị ewu ewu ma baa uru mgbe ị na-arụ ọrụ na ngalaba Arduino Project bụ ihe mmetụta. Ihe mmetụta bụ ihe na-eme ka anyị gbasaa arụmọrụ nke bọọdụ ahụ, ha na-arụ ọrụ dị ka mmeju ma ọ bụ ngwa ndị agbakwunyere na otu ma ọ bụ karịa efere. Ugbu a, otu osisi Arduino, n'onwe ya, enweghị ike ijide ozi ọ bụla site na mpụga ma ọ bụ site na gburugburu gbara ya gburugburu, belụsọ na ọ pụrụ iche na ọ nwere ngwaọrụ ọhụrụ.
Ma ọ bụghị ya, naanị ozi anyị na-eziga site na ọdụ ụgbọ mmiri nkịtị na bọọdụ nwere ike iji. Ọ bụrụ na anyị chọrọ inweta ozi site na mpụga, naanị anyị ga-eji ihe mmetụta.
Jiri dọkụmentị Arduino wulite ya na ngwa nbipute 3D
Enweghị ihe mmetụta ọnyà, ya bụ, enwere ụdị mmetụta dị iche iche dịka ụdị ozi anyị chọrọ ijide, ma anyị agaghị echefu ma ọlị na a gaghị edozi ozi a ma ọ ga-abụ ihe ọmụma bụ isi. Nhazi ihe omuma a bu Arduino ma obu ndi ozo yiri ya nke gha eme dika akwa ma obu ihe ntaneti n’etiti ihe anakọtara na ihe ngwanro a
Kedu ụdị ihe mmetụta dị maka Arduino?
Dị ka anyị kwurula na mbụ, e nwere ọtụtụ ụdị ihe mmetụta maka Arduino. Ndị kachasị ewu ewu bụ ihe mmetụta metụtara ihu igwe, ndị a bụ: ihe mmetụta okpomọkụ, ihe mmetụta iru mmiri, ihe mmetụta ọkụ, ihe mmetụta gas ma ọ bụ ihe mmetụta ikuku nke ikuku.. Ma enwekwara ụdị mmetụta dị iche iche nke na-ewu ewu site na ngwaọrụ mkpanaka dịka sensọ mkpịsị aka, ihe mmetụta iris ma ọ bụ ihe mmetụta olu (ka ị ghara inwe mgbagwoju anya na igwe okwu).
na temometa Ha bụ ihe mmetụta na-anakọta okpomọkụ nke gbara gburugburu ihe mmetụta ahụ, ọ dị ezigbo mkpa icheta nke a n'ihi na ọ bụghị ọnọdụ okpomọkụ nke efere ahụ kama ọ bụ nke ihe mmetụta ahụ. A na-eziga ozi ahụ enwetara na bọọdụ Arduino ma nye anyị ohere ọ bụghị naanị iji mgbakọ ahụ dị ka temometa kamakwa iji mmemme na-arụ ọrụ dị iche iche dabere na mpụga mpụga nke ngwaọrụ ahụ.
El iru mmiri mmetụta Ọ na-arụ ọrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ụdị ihe mmetụta ahụ gara aga, mana n'oge a, ihe mmetụta ahụ na-anakọta iru mmiri nke gbara ihe mmetụta ahụ gburugburu ma anyị nwere ike ịrụ ọrụ na ya, ọkachasị maka ebe a na-akọ ugbo ebe iru mmiri nke ihe ọkụkụ bụkwa ihe na-agbanwe agbanwe na akaụntụ.
El ihe mmetụta ọkụ awụlitere elu-ewu ewu mgbe ya ngwa na mobile ngwaọrụ. Ọrụ kachasị ewu ewu bụ iwelata ma ọ bụ rụọ ọrụ ụfọdụ dabere na ọkụ ngwaọrụ na-enweta. N'ihe banyere ekwentị mkpanaaka, dabere na ogo ọkụ nke ihe mmetụta ahụ na-enweta, ihuenyo ngwaọrụ gbanwere nchapụta. N’iburu nke a n’uche, anyị nwere ike ịchọpụta na ọrụ metụtara ụwa ọrụ ugbo na-echebara ụdị mmetụta a maka Arduino.
Ọ bụrụ na anyị achọọ ngwaọrụ nchekwa, iji mee mmemme ma ọ bụ naanị ịnweta ngwanrọ Arduino, ezigbo nhọrọ bụ iji ihe mkpịsị aka mkpịsị aka. Ihe mmetụta nke ga-ajụ anyị maka mkpịsị aka iji gbochie ma ọ bụ kpọghee ohere. Ihe mkpịsị aka mkpịsị aka ghọrọ ihe a ma ama ruo oge ụfọdụ, mana ọ bụ eziokwu na rue ugbu a enweghi ọtụtụ ọrụ karịa ịmepe ihe.
A na - atụkwa ụda olu na ụwa nche ọ bụ ezie n’okwu a enwere ike iwere ya ngwa ngwa gaa ụwa ndị ọzọ dịka ụwa nke AI ma ọ bụ ndị enyemaka olu. Yabụ, n'ihi ụda olu, onye ọkà okwu nwere ike ịmata ụda ma mata ọdịiche dị iche iche ma ọ bụ ụdị ndị ọrụ dabere na ụda olu anyị jikọtara. O di nwute na ihe mkpisi aka nkpu aka na ihe olu olu bu ihe di oke onu ahia ma sie ike inweta ma soro ya rụọ ọrụ, ma ọ dịkarịa ala maka ndị ọrụ kachasị novice na-arụ ọrụ na Arduino.
Enwere m ike iji ihe mmetụta ma ọ bụrụ na m bụ onye ọrụ novice?
Ajuju nde dollar maka ọtụtụ ndị na-agụ isiokwu a bụ ma ọ ga-ekwe omume iji ihe mmetụta nwere ihe ọmụma dị ala ma ọ bụ na ọ gaghị ekwe omume. Azịza ya bụ ee. Ọ bụ karịa, ọtụtụ ntuziaka na-akwado ngwa ngwa iji ihe mmetụta sensọ na Arduino, iji mee ka mmụta gị dị ngwa.
Usually na-amụtakarị iji ọkụ ọkụ mbụ, ngwa ngwa ma dị mfe iji mụta. Ka oge na-aga, a malitere iji ihe mmetụta okpomọkụ ma ọ bụ ihe nhụjuanya iru mmiri, ihe mmetụta dị mfe iji, dị mfe inweta ma ha nwere ọtụtụ ọrụ na-enyere aka ịmụta iji ụdị ngwaọrụ a.
Kedu ihe mmetụta a na-atụ aro ka ị jiri na Arduino?
Enwere ọtụtụ ụdị mmetụta na nke ọ bụla n’ime ha na-arụ site iche iche ụdị, ya mere ọnụ ọgụgụ nke ihe mmetụta dị oke elu. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịmepụta ọrụ na otu ihe mmetụta ma ọ bụ jiri ọtụtụ sensọ, nke mbụ anyị kwesịrị ikpebi ihe ndụ a ga-ebi. Ọ bụrụ na anyị ga-eme otu otu nwere ihe eji eme ihe, ọ kachasị mma ịhọrọ iji ihe mmetụta dị elu, nke mere na ozi a dị ka o kwere mee.
Oburu na anyi choro mepụta ọrụ nke ga-emecha mepụtaghachi, nke mbụ ana m akwado iji ihe mmetụta dị ọnụ ala anyị nwere ike ịchọtaMgbe e mesịrị, mgbe anyị nyochara na ọ na-arụ ọrụ, mgbe ahụ, anyị ga-anwale ọtụtụ ụdị ihe mmetụta nwere otu ọrụ ahụ. Mgbe e mesịrị, mgbe anyị na-achịkwa karịa ihe mmetụta, anyị ga-amaworị ụdị nke ụdị ma ọ bụ ụdị ihe mmetụta iji rụọ ọrụ mgbe anyị ga-arụ ọrụ ọhụrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Arduino » Sensọ maka Arduino, nnukwu ngwakọta maka ndị ọrụ novice
Ọmarịcha ozi, onye n'ime gị nwere ike ịrịọ maka otu nke ọ bụla?
Ọrụ 3 na RGB Led na Arduino
Okpomọkụ mmetụta maka Arduino